Famonoana soavaly iray fitondra mihazakazaka, mampizara ny firenena momba ilay lalao malaza be fiadiana ny ho Tompondakan’i Melbourne · Global Voices teny Malagasy
"Pur-sang" natsahatra, darohana, dorana herinaratra fandrihana sy hosihosena
Voadika ny 23 Novambra 2019 16:23 GMT
Petadrindrin'ilay fanentanana. Natolotry ny Mpiara-mientana ho amin'ny Fiarovana ireo Soavaly Fitondra Mihazakazaka.
Ny taona 2019, niteraka tsikera maro ilay hazakazaka soavaly tao Aostralia, ny Melbourne Cup (Tompondakan'i Melbourne), taorian'ny tantara vao haingana navoakan'ny fandaharana 7.30 an'ny Australian Broadcasting Corporation.
Ilay Hazakazaka Farany: nahitàna antsipirihany manelingelina momba ny fanilihana ilay “karazana tsy mifangaro (pur-sang)” efa tsy afaka miasa intsony ho sakafon'ny olombelona ny lafy ratsin'ny indostrian'ny hazakaza-tsoavaly. Nampiseho lahatsarin‘ilay antsoina be hoe “fanaovana tsinontsinona” an'ireo soavaly izay tsy nilaina intsony. Nasehony ny famonoana azy ireny any amin'ny toeram-pamonoana biby izay nahitàna biby voadaroka, nodorana tamin'ny herinaratra ary “voafandrika sy voahosihosy”. Nolazain'izy io fa soavaly mihoatra ny 4000 no soavaly manjavona isantaona, isa izay notsipahan‘ireo manampahefan'ny hazakazaka, toy ny Racing Victoria.
Tena mampalahelo be ny fahitan'ireo mpijery sasany ilay ampahany. Nanely ny fihetsehampon'izy ireo ity fanehoankevitra tamin'ny dika fohy tao amin'ny Facebook ity:
Peter Gill: Voalohany nandeha tamin'ilay Melbourne Cup aho, tamin'ity taona ity tao anatin'ny 67 taona, vao nofoanako izany. Tsy afaka ny hanohana indostria mahatsiravina toy izany aho
Notsipahan‘ireo filankevipitantanan'ny indostria toy ny Racing Victoria ireo isa ireo. Na izany aza, fotoana fohy taty aoriana, nanambara fandaharanasa izy ireo, izay mitentina 25 tapitrisa $AU [17 tapitrisa Dolara Amerikana] ho fanampiana ara-tsosialy ho an'ireo soavaly fitondra mihazakazaka.
Andiana olana maro nifandraika tamin'izany no nasongadina taorian'izany tantara ratsy izany. Zavatra nanahirana tsy tapaka ireo ratra sy fahafatesana nifandraika tamin'ilay hazakazaka ho Tompondaka. Nanintona ny saim-bahoaka tamin'ny endrik'ilay hazakazaka sy ireo hazakaza-tsoavaly amin'ny ankapobeny ny famonoana ireo soavaly tratry ny fahatapahana taolana.
Nihamaro ireo antso ho fampitsaharana ny fampiasanan'ireo “jockeys” karavasy mandritra ireo hazakazaka, maro ireo nanantena fa hofoanana tsy ho ela izany fomba fanao izany:
#lalànan'nyfanatanjahantena fiadanan'ny biby sy ny fanatanjahantena, Tompondakan'i Melbourne: mety ho foanana amin'ny hoavy ny karavasy amin'ny hazakaza-tsoavaly noho ny “olana ara-pomba fijery”, hoy ny manampahefana iray https://t.co/E6bO69FagB tamin'ny @abcnews
Nanampy ity valinteny mandrasarasa ity ny The Juice Media, mpahay lahatsary fanesoesoana, tao anatin'ireo andiana dokambarotra Honest Government nataony:
Nanolotra ny fanombànany tao amin'ny tranonkala Sportageous, fanadihadiana ara-panatanjahantena an-tambajotra, i Zushan Hashmi:
Mety tsy hisy mihitsy ny hoe hisy olona manerana ny firenena sy ny tany hihevitra ity fanatanjahantena ity ho toy ny maherisetra, satria misy vola be, fahafinaretana sy fialamboly be loatra tafiditra ao.
Nanoro fomba handraisana andraikitra, indrindra hetsika maro afaka atao fanolo ho an'ilay andro sy fanjohiana ireo fihetsiketsehana ny Mpiara-mientana ho amin'ny Fiarovana ireo Soavaly Fitondra Mihazakazaka. Nisy hetsi-panoherena nandritra ireo fihaonana hazakazaka sy nandritra ny lanonan‘ilay fiadiana ho Tompondaka. Nihevitra ny bitsika sasany fa nisy fiantraikany tena izy ireo haino aman-jery ratsy:
Niasa tao amin'ny pub iray aho nandritra izay 10 taona lasa farany, korontambe foana isaky ny andron'ny #MelbourneCup, milahatra any ivelany ny olona mba hilokàna dieny mialoha. Tamin'ity taona ity, tsy nisy olona voaisa amin'ny ratsan-tanana akory aza, tonga niloka tao anatiny. #TsiaHoAn'ilayTompondaka
Nikasa ny halaza nandritra ilay andro malaza, niatrehana ny #MelbourneCup2019. ilay tenifototra #NupToTheCup (TsiaHoAn'nyTompondaka) tamin'ny twitter-ndry zareo. Mampiseho tsara ireo fomba fijery mifanohitra ireto bitsika mifangarika ireto:
Tena ❤-ko ny #MelbourneCup2019 . Fotoana tsara indrindra ao anatin'ny taona. Hazakazaka lehibe, tantara lehibe. Avy amin'ny asa mafy ataon'ireo #mpiambina mankany amin'ireo #mpanazatra, miasa mafy ianareo mba hivelomana. Mafy be iny taona iny, fa raha mba fantatr'ireo olona ireo mantsy ny fikarakaranareo tsara ireo soavaly taizainareo. #holavaandroiainanananyhazakaza-tsoavaly pic.twitter.com/FKG3EKXBLw
Araka ny fombandrazana, ahaton'ilay Andron'ny Tompondaka ny firenena amin'ny fakàn'ny ampahany lehibe amin'ny Fanjakan'i Viktoria andro tsy fiasana ary hatramin'nyparelmanta federaly mihitsy aza mba hijerena ilay hazakazaka raha anaty fivoriany izany . Nisy 81.408 no isan'ireo nijery ilay hazakazaka tamin'ity taona ity, isa ambany indrindra tao anatin'izay 24 taona izay na teo aza ny toetrandro mafana sy maina. 122.736 no isa farany ambony indrindra tamin'ny 2003. Ambany noho ny tamin'ireo taona lasa ihany koa ny fijerena ny Fahitalavitra nasionaly.
Voakasika ihany koa ireo lalao filokàna, izay ambanin'ny 6% eo noho ny tamin'ny 2018 ny ankapoben'ny vola niditra amin'ny filokàna nanerana ny firenena.
Tombontsoa amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny daholobe ho an'ireo mpikarakara ilay Tompondaka ny valin'ilay hazakazaka. Ny naharesy, i Vow sy Declare, no voalohany avy tao an-toerana hatramin'ny 2009. Soavaly eo an-toerana izay Aostraliana no mpanazatra azy, jockey sy tompony. Amin'izao toe-javatra izao, ratra lehibe iray ihany no notaterina, i Rostropovich izay niatrika fahatapahan'ny maojany. Antenaina ho sitrana izy.
Manana torohevitra ho an'ireo izay mety ho voakorontan'izany ny olona iray mpampiasa Aterineto :
Raha nahazo vola tamin'i Rostropovich, tao amin'ny laharana farany ianao nandritra ny fanadiovana birao, omeo ho an'ny asa soa ho fiantrana biby izany. #MelbourneCup2019 #MelbCupCarnival
[Hazavaina ato ny filokàna amin'ny hazakazaka.]
Azo antoka fa tsy maintsy hamerina ny karnavalin'ny hazakazaka rehefa lohataona ilay adihevitra.